I-SP-USB02 I-SOICARE i-USB epholileyo i-aromatherapy ye-oyile ebalulekileyo yeoyile yemoto, China SP-USB02 SOICARE I-USB epholileyo inuka i-aromatherapy i-ultrasonic ebalulekileyo yeoyile yemoto eyenziweyo Abavelisi, abaXhasi, iFektri -Sunpai Industries Limited
I-SP-USB02 I-SOICARE i-USB epholileyo i-aromatherapy ye-ultrasonic ebalulekileyo yeoli yeoli
I-SOICARE i-USB epholileyo i-aromatherapy ye-ultrasonic ebalulekileyo yeoli yeoli
Ibhokisi yombala + Polyfoam
· I-2-in-1 ICAR OIL DIFFUSER: Xa kuthelekiswa nezinye izinto zokuthomalalisa iimoto, ioyile yethu yeoyile ye-USB yenziwe ngezinto ezinganyangekiyo ngokubola ze-PP ezinokukuvumela ukuba ulahle iioyile ezifanelekileyo ngokuthe ngqo kwezi zisihambisi. Ukongeza, le humidifier ye-ultrasonic iya kwenza ioyile inyibilike emanzini ngokukhawuleza okukhulu. Ngelixa ukonwabela inkungu epholileyo, uya kuba nayo kwakhona i-aromatherapy emangalisayo yokuphumla.
· SHINTSHA NGOKUQHELEKILEYO NGOKUQHELEKILEYO: Ukutshintsha kabini kuyilelwe. Kulunge ngakumbi ukuba intambo ye-USB inokugcinwa emazantsi ale aromatherapy diffuser. Kulula ukwenza ukuba le diffuser isebenze, qala uchukumise ukuqala inkungu, okwesibini ukucima umbala kunye nokuchukumisa okwesithathu ukuyeka ukusebenzisa.
· I-HUMIDIFIER YOKUTHUTHA EPHATHELELEYO: Esi sisicocisi esincinci esiphathwayo, ungasiphatha ngokulula usise nakweyiphi na indawo oyifunayo. Ingumbono olungileyo kwigumbi lokulala eofisini yokuhlambela abantwana ekhaya Ingxolo esebenzayo ayizodlula i-30db. Awusoze uzive uphazamisekile xa uqhuba ulele okanye ufunda.
· I-7-COLOR I-LED LIGHT Lights: Iimpawu zombala ezi-7, le humidifier yemoto iya kutshintsha ngokuthe ngcembe umbala wokukhanya okuphefumlayo ngexesha lomsebenzi, inokukhethwa icinywe ngokokhetho lomntu. Ayisiyonto ifanelekileyo yokusasaza ioyile kuphela, kodwa lukhetho olufanelekileyo lokuhombisa imoto yakho yokulala kunye neofisi yakho.
· UKUVALWA KWAMANZI NGANGAMANZI: Isithuthi sethu se-ultrasonic semoto sinokubamba i-60ml yamanzi kwaye siqhubeke nokusebenza ixesha ukuya kwiiyure ezi-6. Izakuvala ngokuzenzekelayo xa kukho amanzi amancinci aseleyo, anokuthintela isixhobo ukuba sonakaliswe.
Imoto ye-USB ebalulekileyo yokusasaza ioyile
Mhlophe / Mnyama
Ngama-76 * 76 * 128 mm